Baraarujin Qaybtii 1aad
Nasriga Alle waa uu imaan, ee yaan la degdegin
Saalan ka dib, waxaan la hadlayaa dadka khayrka jecel ee doonaya in gaalada wadankeena laga saaro, dadkaas waxaan leeyahay anagu waxaan doonaynaa nasri ama shahaado, walaahi waxaa liibaanay ragga dagaalamaya, hada ragaas hala saacido, qof walba waxaad awoodo, si gaar mar walba ha loo duceeyo,nasriga Alle waa uu imaan ee yaan la degdegin, Muslimkii iska daa gaaladii ayaa waxay leedahay baacsiga Muslimiinta, Muslimiinta ayaa ku kacaya oo ogaanaya cadawgooda.tan kale ogaada cadawga muuqda waxaa ka badan kan qarsoon, dadkaasna waxaa lagu colaadinyaa waa islaamnimada, waayo islaamka ayaa laga helayaa Cadaalada, gaaladuna ma rabto Caadaaladda.
Dadka illaahay dartiis u jihaadayana waxaan leenahay , ku sabra jihaadka, haddii dhamaantiin aad shahiidaan, waxaad ka tegaysaan adduunyadaan lagu dulminayo Muslimiinta, intii awoodiinana waad gudateen xilkiinii, tan kale ogaada imtixaankaan waxaa idinkaga horeeyay Muslimiin badan fiiriya waxa ka dhacaya Ciraaq, Falastiin, Jeejniya iyo wadamo kale oo badan.
Dadka Jidka Alle ku dagaalamaya halkaan xadiis si fiican ha u fiiriyeen:- Abuu Cabdullaah Khabbaab ibn Arat (A.K.R.) wuxuu yiri: Waxaan uga eed sheegannay nabiga (S.C.W.) dhibaatada iyo culeyska siyaadada ah ay nagu hayeen gaaladii reer Makkah. Wuxuu markaa nabigu jiifay hooska Kacbada, isagoo ka dhigtay barkin go'iisii. Waxaynu ka codsannay oon ku niri: Maxaad Alle kaalmo inooga baryi weyday? maxaa Alle hiil inoogu waydiin weyday? Wuxuu ku jawaabay: Waxaa dhici jiray Ummadihii idinka horreeyey dhexdood, in nin la soo qaban jirey, waxaana lagu ridi jiray god looga qoday dhulka, markaas baa laba looga kala dhigi jiray miinshaar madaxiisa la kor yeelay, ama hilibkiisaa firitaan looga fiiqi jiray lafahiisa shanlooyin bir ah, waxaas oo idilna ma keeni jirin inuu diintiisa ka noqdo. Waxaa hubaal ah inuu Alle kor yeeli uuna hirgelin Islaamka illaa rukuub fuushanahu uu isaga socdo Sanca iyo Xadramuud isagoo aan waxba ka baqayn Alle maahee iyo khatarta yeyda ay u leedahay arigiisa. Laakiinse waxaad u muuqataan sida inuu idinku jiro degdeg badan"(Muslim).
Dadka jihaadaya,waalidkooda iyo walaalahooda iyo dhamaan qaraabadooda waxaan leeyahay walaahi waad liibaanteen dadkiina u duceeya, kuna sabra imtixaanka la marsiinayo, akhriya qisadii asxaabul ukhduud, dhibkii la marsiiyay.
Kuwa cadawga nagu soo hogaamiyey, iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo kuwa qalbiga ka taageersan, waa isku mid dhamaantood, waxaan leeyahay adduunyadaan waa laga tegayaa, marka aakhiro la tago idinkaa ka shalayn waxaad samayseen., shaydaan iyo gaalada idin siraysa cadaabka Alle ha idinka badbaadiyeen.
Kuwa cadawga nagu soo hogaamiyey, iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo kuwa qalbiga ka taageersan,Halala hadlo si gaar waalidkooda iyo walaalahooda iyo dhamaan qaraabadooda ha la hadleen, haday diidaana bari ha ka noqdeen,walaahi hadaad la safataan isku wado ayaad qaadaysaan aakhiro..
Dagaalka intii ku shahiiday ilaahay shahaadadooda ha u aqbalo, inta dhaawacana ah, Illaahay ha caafiyo, inta wadadooda haysana allaha sugo Aamiin..Aamiin, Aamiin
Ugu Danbayntii Illahay waxaan ka baryayaa in uu u gargaaro muslimiinta meel kasta oo ay joogaan. Aamiin,aamiin, inta khayrka la jecelna dhamaantooda Allaha ku sugo Xaqa.aamiin,Aamiin.Aamiin.
La soco qaybaha kale haddii rabbi idmo
Walaalkiin fil islaam C.raxmaan C.laahi